Qaybta suuqa ee AirPods ayaa hoos u dhacday adduunka oo dhan | Waxaan ka socdaa mac
Tan iyo markii ay Apple sii deysay AirPods ku dhowaad 4 sano ka hor, suuqa dhegaha ee TWS (True Wireless Stereo) waxaa qabsaday Apple, in kasta oo ay iyagu ma ahayn kuwii ugu horreeyay ee suuqa soo galaa. Si kastaba ha noqotee, maadaama marti cusub ay yimaadeen suuqa, saamiga AirPods wuu sii yaraanayay, in kasta oo uu sii wado hogaaminta.
Sida ku cad xogtii ugu dambeysay ee la daabacay Counterpoint, Qaybta suuqa ee AirPods 9-kii bilood ee la soo dhaafay waxay ka tagtay 41% ilaa 29%. Si kastaba ha noqotee, shirkadda fadhigeedu yahay Cupertino waxay sii wadaa inay ku hogaamiso suuqa dhegaha TWS hoggaan ballaaran oo aan khatar gelinayn booska ugu sarreeya.
Rubucii afaraad ee 2019, saamiga Apple ee suuqa TWS wuxuu ahaa 41%, oo la wareegay 62% dakhliga kasoo xarooda iibinta samaacadahaas. Qeybtii seddexaad ee 2020, saamiga suuqa wuxuu istaagay 29%, si kastaba ha noqotee, macnaheedu maahan in Apple joojisay iibinta AirPods, laakiin in tirada tartamayaasha suuqan ay kordheen, gaar ahaan qeybta hoose ee kala soocida.
Inta lagu jiro rubuca saddexaad ee 2020, kalabar 10ka iibiye ee ugu sarreeya raqiis bay ahaayeenSoosaarayaasha bixiya samaacadaha dhagaha ee TWS in ka yar 50 doolar, mararka qaarna ka hooseeya 20, iyaga oo ah Xiaomi soo saaraha ugu koray ee u ogolaaday inay kaalinta labaad ku jirto. Samsung waxay ku jirtaa booska saddexaad iyadoo leh 5%.
Majiro jaakad ama sameecado
Sida laga soo xigtay Liz Lee, oo ah falanqeeye ka tirsan Counter Point, u janjeera ka saar qalabka taleefanka lagu xiro iyo sameecadaha, ayaa ka mid ahayd sababaha keenay in iibka TWS si aad ah kor loogu qaado sannadihii la soo dhaafay, sameecadaha dhagaha noocan oo kale ah ayaa ah xalka kaliya ee laga heli karo suuqa si looga dhagaysto muusikada moobiilkeena xaalad kasta.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Apple » Noticias » Qaybta suuqa ee AirPods ayaa hoos u dhacday adduunka oo dhan
Barnaamij dayactir oo bilaash ah oo loogu talagalay 13-inch MacBook Pro shaashadaha ayaa la ballaariyay